U-DJ Cleo akacacisi ngomdlali wakhe kuChiefs ‘ohola u-R5000’ | News24
U-DJ Cleo akacacisi ngomdlali wakhe kuChiefs ‘ohola u-R5000’
Cape Town – Imenenja yomdlali kanozinti weKaizer Chiefs, uBruce Bvuma, nokungu-DJ odomile kanye nomdidiyeli womculo, uTlou Cleopas Monyepao, odume ngelika-DJ Cleo akafuni ukuphumela obala ngemibiko yokuthi lo nozinti amphethe uhola u-R5000 nje vo ngenyanga kulezi zinkunzi zaseSoweto, kubika iKickOff.
NgeSonto, imibiko yabezindaba ithe uBvuma, noke wadlala ejenjini elikhulu leChiefs kule sizini, ubehola imali abalandeleli abayibiza ngokuthi “ushintshi wasephaketheni” kumdlali odlala ibhola elikhokhelwayo, nalapho iChiefs ngoMsombuluko ikhiphe isitatimende nalapho ibizwakalisa khona uhlangothi lwayo kulolu daba.
IKickOff.com ibe isithinta uDJ Cleo ukuze ithole ukucaciseleka nalapho ephendule ngokuthi: “Angifuni ukukuqinisekisa lokho, ngoba ungifonela ngento eshiwo umuntu othile. Akushiwongo yimina, kushiwo yiphephandaba.
“Ngakho, njengoba ngisholo kwiphephandaba, akungisizi ukudalula ulwazi ngomuntu kwabezindaba. Ngakho, angikwazi ukuqinisekisa noma ngikuphike lokho ngoba angeke ngiwine. Angeke kuze kusize mina. Ngethema ukuthi uzoyiqonda leyo ngxenye. Ngisafuna ukwenza ibhizinisi neChiefs kanye namanye amakilabhu. Akungisizi mina ukukhuluma kabi noma ngabe ubani,” uMonyepao utshele iKickOff.
UNobhala Jikelele weSouth African Football Players Union (SAFPU), uThulaganyo Gaoshubelwe, uthi sebekhulumile nePremier Soccer League ukuthi yethule iholo eliphansi okungamele kube nomdlali ozohola ngaphansi kwalo.
“Besilokhu senza izethulo ngalokhu [iholo eliphansi okumele liholwe abadlali] kusukela ngo-2012. Senza isiphakamiso sa-R35 000 kuPremier Soccer League kanye no-R15 000 kuya ku-R18 000 kwiNational First Division njengeholo eliphansi,” uGaoshubelwe utshele iKickOff.com.
Uqhube wathi uma kungukuthi lokho kwenziwa yikilabhu enkulu njengeChiefs, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi maningi namanye amakilabhu akwenzayo.
Esitatimendeni, Amakhosi awafunanga ukuphumela obala ngehola lalo nozinti, kodwa yabe isichaza ukuthi uBvuma njengomdlali osesesigabeni sabadlali abasathuthukiswa (development) – futhi obekungalindelekile ukuthi adlale eqenjini elikhulu kule sizini – ubeseholelwa iholo eliphansi njengomdlali osaqeqeshwa.